Kuvaka Bhizinesi Rako Kupfurikidza Kuteerera Pamhepo | Martech Zone
Muvhuro, Mbudzi 16, 2015 Muvhuro, Mbudzi 16, 2015 Douglas Karr
Tiri pane saiti muTennessee nekambani isu yatiri kubatsira kuburikidza nehunyanzvi hwekumaka shamwari. Thaddeus Rex. Wonder Laboratories ikambani yekuAmerica inogadzira uye ichigovera zvinowedzera zvinovaka muviri uye mavitamini.
Wonder Laboratories anga aripo kweanopfuura makore makumi maviri nemashanu - kutanga nekutengesa katalog uye izvozvi achifamba online. Iko kusimukira kuri kwega kune varidzi vekambani kubatsira vanhu kuwana hutano. Ivo havasi mune yakakwira-yekumanikidza kutengesa indasitiri yezvikafu, ivo vane hanya chaizvo nevatengi vavo.
Thaddeus ari kuzovabatsira kugadzira uye kuwana yavo yakasarudzika meseji kunze uko - asi heino muenzaniso unoshamisa we online kuteerera uye kuti iri kuvabatsira sei kubatsira vatengi vavo. Vakanga vachiona mimwe mibvunzo online uye mareferenzi achiuya kuburikidza neayo analytics pane vatengi vari kutsvaga kuwana B12 zvinowedzera imbwa uchitambura nenyaya dzekugaya.
Kunyanya, nyaya iri Exocrine Pancreatic Kusakwana, inonetesa zvinotyisa uye yakaoma kuongorora nyaya nezvipfuyo.
Exocrine pancreatic insufficiency (EPI) inokanganisa kugona kwemhuka kugaya uye kupinza zvinovaka muviri zviri muchikafu. Nekuda kwema enzymes ekugaya asina kukwana akagadzirwa nepancreas, chikafu chinopfuura nemuviri zvisingawanikwe. Mhuka dzine EPI dzinodya zvine mutsindo nekuti ivo havagone kuwana chikafu kubva kuchikafu chavanodyisa. Via Wonder Labs PET Chinhu Chinhu B-12 ™ Formula
Wonder Laboratories yaive neB-12 yekupa asi yaive yevanhu, kwete mhuka. Vakavamba kambani vakaona inoreva traffic kubva kune iyo EPI nheyo saiti uye ndokusvika kunharaunda. Ivo vakakwanisa kukurumidza kushanda neiyo EPI hwaro kugadzira dhizaini yakasanganiswa yeiyo B-12 chigadzirwa kunyanya yezvipfuyo. Nekuda kweizvozvo, Wonder Laboratories parizvino ndiyo inotungamira mukutengesa kwekuwedzera kwehutano hwezvipfuyo semhedzisiro.
Uyu muenzaniso unoshamisa wekutarisa kutumira motokari kuziva mikana yekukudza bhizinesi rako. Ini ndaingoda kugovera uyu unokurumidza muenzaniso wekukosha kwekuteerera online. Ini ndinofunga uyu muenzaniso unoshamisa wekuti ikambani yakateerera sei, ikapindura sei, uye ikamisikidza rwizi rwemari rutsva Iye zvino Wonder Labs iri kutarisa dzimwe nyaya dzinovaraidza uko zvinovaka muviri zvekuwedzera zvinogona kuve zvakakosha.
Tags: b-12Exocrine pancreatic kusakwanaPET chinhudzinovaraidzatennesseehameno ma laboratorieshameno labs